Alderweireld, Neymar, Mahrez, Isco, Conte & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga – Kooxda.com
Home 2018 February Suuqa, Wararka Maanta Alderweireld, Neymar, Mahrez, Isco, Conte & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga
Alderweireld, Neymar, Mahrez, Isco, Conte & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala iibsiga
Wacan oo wanaagsan Akhirsatayaasheena sharafta leh ee aanu aadka u jecelnahay ku soo dhawaada barnaamij maalinle ah oo aynu ku eegi doono wararka wargaysyada kala duwan ee ay adduunku ka qoraan suuqa kala iibsiga.
Waxa dhab ah in uu suuqii kala iibsigu xiray laakiin arintaas ayaan kooxaha reer yurub ka hor istaagi doonin in ay sii calaamasadaan ama sii indha indheeyaan xiddigihii ay u dhaqaaqi lahaayeen marka uu suuqu dib u furmo xagaaga dambe.
Koox kasta ayaa sidoo kale la xiriiri karta wakiilada xiddigaha ay doonayaan iyaga oo ka waraysan kara xiddigaha ay wakiilka u yihiin.
Si kasta ha ahaatee kooxna looma ogola in ay si toos ah ula xiriirto xiddigaha iyada oo aan ogolaansho ka haysan kooxda xiddiga.
Hadaba wararka aanu halkan ku soo gudbin doono wax masuul ah kama aha Kooxda.com kaliya waxa masuuliyadooda leh wargaysyada ku hor xusan.
Daafaca Tottenham Toby Alderweireld ayaan Tottenham ula safri doonin Turin kulankooda Champions League ee ay la ciyaarayaan Juventus taas oo shaki galinaysa mustaqbalka 28 jirkan ee kooxda Tottenham (Telegraph).
Weeraryahanka kooxda Tottenham ee Fernando Llorente ayaa shaki galiyay mustaqbalkiisa kooxda Tottenham isaga oo qirtay in uu u xiisay kooxda Juventus (Mirror).
Tababaraha kooxda chelsea ee Antonio Conte ayaa qirtay in ayna wax saamayn ah ku yeelan xiddigihiisa wararka xanta ah ee ku hareeraysan mustaqbalkiisa kooxda (Sky Sport).
Tababaraha Kooxda Man United ee Jose Mourinho ayaa doonaya in uu Man City ku garaaco saxiixa 25 jirka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Isc (Star).
Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Leicester city ee Riyad Mahrez ayaa shir la yeeshay xiddigaha ay isku kooxda yihiin kadib markii uu 10 maalmood seegay tababarka sida uu sheegay daafaca Danny Simpson, 26 jirka reer Algeria ayan 10 maalmood qaadan tababar sidoo kale seegay laba kulan kadib markii uu ku fashilmay in uu ku biiro Man City (Leicester Mercury).
Daafaca kooxda Real Madrid ee Marcelo ayaa ku qanacsan in xiddiga kooxda Paris St-Germain ee Neymar oo 26 jir ah uu ku soo biiri doono kooxda Real Madrid mustaqbalka dhaw (Marca).
Laakiin Daafaca kale ee Kooxda PSG ee Thiago Silva ayaa ku rajo weyn in uu Neymar sii joogi doono kooxda ka dhisan caasimada France (Canal+).
Kooxda Liverpool ayaa kooxaha Tottenham iyo Man United ku garaacaysa saxiixa weeraryahanka reer Spain ee Pinchi (Sun).
Tababaraha kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa xiddiga reer Germany ee Max Meyer u calaamadsaday bartilmaameedkiisa ugu weyn ee suuqa xagaaga (Star).